प्रायः सोधिने प्रश्नः शेन्जेन कुनै स्मार्ट स्मार्ट प्रौद्योगिकी प्रविधिको सीमित
के तपाइँ निजी लेबल स्वीकार गर्नुहुन्छ? MOQ के हो?
हो, हामी निजी लेबल स्वीकार्छौं, MOQ निजी लेबलको लागि p०० pcs हो।
तपाइँको नेतृत्व समय के हो?
हाम्रो नेतृत्व समय २ pack दिन पछि प्याकेजि details्ग विवरणहरू पुष्टि गर्दछ।
तपाइँको उपकरण को लागी तपाइँको वारंटी के हो?
हाम्रो ग्यारेन्टी ढुवानीको १ बर्ष पछि
तपाइँसँग के परीक्षण प्रमाणित उत्पादन छ?
हामी सीई, RoHS, एफसीसी प्रमाणपत्र छ, हामी पनी कुनै पनी अन्य परीक्षण बनाउन को लागी मद्दत गर्दछौं यदि तपाइँलाई आवश्यक छ।
के तपाइँ नमूनाहरु प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ? कति समय लाग्छ?
हो, नमूनाहरू उपलब्ध छन्, २--2 दिन भित्र पठाउन सकिन्छ।
कसरी गहन पल्स्ट लाइट टेक्नोलोजीले काम गर्दछ?
कार्य सिद्धान्त: उपकरण छालाको मुनि र रूट तताएर काम गर्दछ। कपाल र कपालको जरामा रहेको मेलानिनले रिलिज भएको प्रकाश नाडीहरू अवशोषित गर्दछ। कपालको गाढा रंग, अधिक प्रकाश लिन सकिन्छ। यो प्रक्रियाले केशलाई आराम गर्ने चरणमा जान उत्साहित गर्दछ। उपचारको बीचमा, कपाल स्वभाविक रूपमा शेड हुन्छ र रिक्रोथ निषेध गरिएको छ। कपालहरूले एक वा दुई हप्ता लिन सक्दछ।